ရန်ပိုင်| January 9, 2013 | Hits:1,263
| | တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက် ၁၉၆၄ ခုနှစ်က ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည့် ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့ကို ကလေးသူငယ်များ၏ စာရိတ္တနှင့် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Mann January 9, 2013 - 10:20 am ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်
Reply Sai Linyone January 9, 2013 - 10:49 am Instead of forming scout style youth movement from above, the youths themselves better form it. The youth must be givenachance to explore it, learn from it and extend their capability for the betterment of the society.
Reply sau gerald January 9, 2013 - 1:40 pm ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာကောင်းမွန်သော..လုပ်ရပ်..လုပ်သင့်.လုပ်ထိုက်..ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့.အနာဂါတ်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်တင်မက..တိုင်းပြည်အတွက်ပါကောင်းမွန်အထောက်ကူဖြစ်နိုင်ပါ၍..နိုင်ငံတကာစံနှုံးနှင့်အညီအခိုင်အမာဖွဲ့စည်းပြီးပါက..နောက်တက်လာသောမည်သည့်အစိုးရက.ပါယ်ဖျက်လို့မရ..ပါယ်ဖျက်ခွင့်မရှိ..စသည့်ခိုင်မာသောဥပဒေတစ်ရပ်ကိုပါ..အတည်ပြုနိုင်ရန်ကိုလွတ်တော်တွင်တင်ပြ..အတည်ပြုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါကသိပ်ကောင်းပါမည်..၄င်းကင်းထောက်အဖွဲ့အတွက်ရံပုံငွေကိုနိုင်ငံတော်၏ဘာဏ္ဍာတော်မှခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ပြုသင့်သည့်အတွက်လည်းလွတ်တော်မှအတည်ပြုသုံးစွဲခွင့်ပြုသင့်ပါသည်..အနားယူသွားကြသော..ဗိုလ်ချုပ်ျွှူးကြီးနှင့်အဖွဲ့(၇၀)ကျော်တို့ရဲ့..အိမ်စေတွေ.ခြံစောင့်တွေနှင့်၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုအားလုံရဲ့အထောက်ပံ့ငွေတွေကို..နိုင်ငံတော်ကတောင်ခံယူဖို့.လွတ်တော်မှာတောင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သေးတာဘဲ..မို့လား…